bass guitarist, Greg Lake, guitarist, producer, muimbi
Gregory Stuart "Greg" Lake(10 November 1947 Poole, England - 7 December 2016 London) aiva muimbi weBrithani, muimbi, muveki uye muimbi, nhengo yeChrismson naEmerson, Lake & Palmer.
60. Zhizha: Vanamwari uye Mambo Akatsvuku
Greg Lake ave achifarira mimhanzi kubva pauduku hwake. Mukurusa kukuru kwakaitwa naEmerson, Lake & Palmer, "Lucky Man," akanyora paakanga achiri kuchikoro. Muna 1968, Lake yaiva nhengo yeboka rainzi The Gods. Muchikwata ichi pane dzimwe nguva nhengo dzaUriya Heep. Nyanje yakasara mu1968 yezhizha risati yasunungura album yavo yekutanga.
Gungwa rakasara kumisa Mambo Crimson naRobert Fripp, shamwari yekare yekuchikoro chake. Sezvo Fripp neChika zvaive pakutanga maigitarist, Lake yakatanga kutamba mabhasi.
Album yeKing Crimson yekutangaMuDare reCrimson KingIchi chakaitwa somunyori uye muimbi. Iyo album yakatanga kubudiswa nemugove Tony Clarke, uyo panguva iyoyo aiva muve weThe Moody Blues. Mazuva mashomanana gare gare, Clarke akabva, nokuti aisagona kunzwisisa kuti boka iri raiedza kuumba chii. Gungwa rakatora basa remurimisi, kunyange zvazvo boka rese rakaratidzwa pane album.
King Crimson akaenderera mberi achitsvaga North America neThe Nice, iyo yaive "rwendo" rwendo. MunaEpril 1970, mushure mekushanyira uku Ichi chibva kune King Crimson uye pamwechete naKeystone Keith Emerson weThe Nice uye mutori weCarl Palmer weAtomic Rooster akatanga nhatu Emerson, Lake & Palmer. Pasinei nokuenda kwake pamutemo kubva kuKing Crimson, Lake yakabvuma kuvabatsira kuti vazadze chechipiri, King CrimsonMune Wake wePoseidon.
70. Zuva: Emerson, Lake & Palmer
ELP yakanga ine kubudirira kwakakura muma1970 (yakatengeswa pamusoro pe30 yemamiriyoni ema album) uye yakabatanidzwa zvikuru mukufambira mberi kwedombo. Ichi chave chakapa nziyo dzakawanda kune repertoire ye ELP, asi chinonyanya kukanganisa chaiva Ndicho la vie guitars (Mabasa Bhuku I), "Kunyange zvakadaro ... Munondishandura" (Brain Salad Surgery) uye "The Sage" ("Mifananidzo paChiratidzo"). Dziva rakave rakakurumbira mushure mekusunungurwa kwe "Ndinotenda muna Baba Krisimasi" mu1975, iyo yakazowedzerwa kuElp album Works Volume II.
In 1973 Lake akavamba Manticore chitaridzi uye chibvumirano nevamwe unyanzvi chaizvo vaimbi vaiva Italian Premiata Forneria Marconi uye Banco Del Soccorso mutates uye anogona kunyora nziyo King Shava uye Emerson, Lake & Palmer Peter Sinfield.
80. zhizha: Asia uye solo basa
Kutevera kubviswa kweboka reElP, Lake mu1983 yakaenda kurwendo neAsia sechinzvimbo chechinguvana chaJohn Wetton uye yakabudiswa maviri solo albhamuGreg Lake(1981) aManeuvers(1983), zvose pamwe nekubatanidzwa kwekare weTin Lizzy guitarist Gary Moore. Muna 1986, pamwe naEmerson naCozy Powell, vakabudisa albumEmerson, Lake naPowell, iro raiva rekubatanidza kweEL naPowell vachitsiva Palmer, uyo akabva atamba madhiramu neAsia.
90. Zhizha: zvakare Emerson, Lake & Palmer
Emerson, Lake & Palmer yakaungana zvakare pakutanga kwegore 1990 uye inopfuurira dombo repertoire yakapfuura zvikuru mumakonti ezhizha uye yakabudisa ma studio maviri albamu. 1998 yakanga ine mafungiro akaipa pakati pevadzidzi veElP uye boka rakasiya boka racho.
2000: Iye zvino Kubudisa uye Greg Lake Band
Keith Emerson, mumashoko ake, "Mifananidzo yeAn Exhibitionist," kubva ku2004, inoratidza mufananidzo weGlig Lake. Akapindura achiti haazoiti ne ELP zvakare. Kubvira panguva iyoyo, haana kuona zvakawanda pamimhanzi, kunyanya paakaenda ku2001 neRingo Starr senhengo ye All-Starr Band. Pakupera kwegore 2003 yakaridza pasi gita muimba "Real Good Looking Boy" naThe Who.
22. Gunyana 2005 yakatanga rwendo rwekambani neboka raro "Greg Lake Band", rakagamuchira mhinduro yakanaka. Bhodhi yakadha David Arch pabhokisi, Florian Opahle patafura, Trevor Barry bass gitare, uye Brett Morgan pamidziyo. Warner Bros / Classic Pictures rakabudisa 2006 double-albamu pakutanga kwaGreg Lake yakanga yakazara, izwi rake rakadzika uye rakanyanya kupfuura kare. Greg Lake Band yaifanirwa kuenda kune imwe nzendo ye 2006 munaSeptember, asi yakadanwa paminiti yekupedzisira nekuda kwe "zvinetso zvekutungamirira."
Greg Lake 21. December 2006 akaita rwiyo "Karn Evil 9" pamwechete neTrans Siberian Orchestra kuNassau Coliseum mu Uniondale, New York.
Akafira muLondon pane 7. December 2016 pazera re69 mushure mekurwa nekenza.
1995King Biscuit Flower Hour Inowanikwa Greg Lake In Concert
1997Greg Greg Retrospective: Kubva Pakutanga
1998Kubva The Underground: The Official Bootleg
1981Kukuda Iwe Zvakawanda
1981Rega Ndikude Usati Waenda
1981Kune Avo Vanotya
1983Mukadzi Anofanana Newe
7: Mukumuka kwePoseidon
14: MuDare reCrimson King
15: The 21st Century Inotungamirira kuna King Crimson - Bhuku Rimwe - 1969-1974
16: Zita rangu ndiEntl
20: Asia (mumhanzi boka)
27: List of hockey zvinomiririra pa MS 2011
29: Nhamba yeBassists
31: Dzokera Kumadziro
33: 1970 mumimhanzi
37: United States pa1984 Summer Olympics
38: Helix (mimhanzi)
39: Kurwisana Nenyika Dzemakwikwi 1997
40: Ice Hockey Varume kuMusika maOlympic 2014
42: The Falls: Testamende yeRudo
45: Pasi Pechifukidziro
46: List of hockey zvinomiririra pa MS 2015
Stuart Gregory "Greg" Lake (. 10 1947 November Poole, England -. 7 2016 London muna December) waiva British muimbi, muimbi, mugadziri uye anogona kunyora nziyo, dzakavamba nhengo King Shava uye Emerson, Lake & Palmer.
Greg Lake nokuzviremekedza vanoda debut Studio Album Greg Lake. Album akasunungurwa muna October 1981 pamwe Chrysalis Records chitaridzi uye mugadziri ake Greg aiva oga Lake.Seznam skladebObsazení Greg Lake - gitare, zpěvGary Moore - kytaraSteve Lukather - kytaraDean Parks - kytaraW. G. Walden - kytaraGreg Mathieson - klávesyBill Cuomo - klávesyTommy Eyre - klávesyMichael Giles - bicíJeff Porcaro - bicíJode Leigh - bicíTed McKenna - bicíTristian Margetts - baskytaraDavid Hungate - baskytaraWillie Cochrane - pipeDavid Milner - pipeClarence Clemons - saxophone
Emerson, Lake & Palmer (akafuridzirwa ELP) yaiva chikwata cheChirungu chemaodzanyemba. Mu 70. makore ezana remakore apfuura aive akakurumbira zvikuru, vakatengesa 40 mamiriyoni ema album uye vakaita masangano makuru. Gamba rakanyorwa naKean Emerson (keyboards), Greg Lake (guitar, bass, vocals) uye Carl Palmer (madhiramu, mhirizhonga). Iri dombo trio, iro rakavakwa muna 1970, rinotora mamwe emabasa eEuropean classical music mubasa rayo uye inogona kuiswa semumiririri wedombo rinofambira mberi uye rwiyo.
Emerson, Lake & Palmer inoitwa eponymous debut studio album neBritish band Emerson, Lake & Palmer. Kunyora kwake kwakaitika mugore re1970 paAdvision Studios muLondon nokuda kwekugadzirwa kwaGreg Lake. Mu UK album yakabudiswa muna October 1970; muUnited States kusvika munaJanuary 1971. Muna 2012, album yacho yakabudiswa mumutambo.
Tarkus ndiyo yechipiri studio album yeBritish progressive rock band Emerson, Lake & Palmer. Kunyora kwake kwakange kuri 1971 munaJanuary paAdvision Studios muLondon. Yakabudiswa naGreg Lake, album yakabudiswa muna June ku1971 kuIceland Records.
The Best pamusoro Emerson, Lake & Palmer (1994) ndiro muunganidzwa Album dombo boka Emerson, Lake & Palmer.Seznam njanji "kubva pakutanga" (4: 13) "Jerusarema" (William Blake, C. Hubert H. Parry) (2 : 44) "Kunyange zvakadaro ... Ungaenda Me On" (2: 53) "Fanfare nokuda Common Man" (Aaron Copland) (Solo shanduro 2: 57) "knife Edge" (5: 05) "TARKUS" (20: 35) "Kwegomo" (2: 43) "mabwe Makore" (3: 44) "Iconoclast" (1: 15) "Misa" (3: 11) "Manticore" (1: 52) "Battlefield" (3: 51) "Aquatarkus" (3: 59) "Karn Zvakaipa 9 1 Part 2st Kwazvo" (4: 43) "C'est La Vie" (4: 16) "Hoedown" (Aaron Copland) (3: 43) "Trilogy "(8: 53)" Honky Tonk Train Blues "(3: 09)" Black Moon "(kuroorwa shanduro, 4: 46)" Lucky Man "(4: 37)" Ndinodavira muna Baba Christmas "(Greg Lake) ( yepakutanga Solo shanduro 3: 30) "Peter Gunn" (Bo nus njanji)
Epitaph is King Crimson rock band kambani boxing. Yakabudiswa muC1997 (ona 1997 muMimhanzi) uye inosangana nekonti nemavhidhiyo zvakanyorwa zveboka kubva panguva yekutanga, kubva ku1969.
Mumuviri wePoseidon ndiyo yechipiri album yeBritish rock band King Crimson. Yakabudiswa muC1970 (ona 1970 mumimhanzi), uye mumabhuku eAlub albamusic rankings akaiswa pa4. nzvimbo, iyo ndiyo mhinduro yakanaka ye King Crimson.
Dean Parks (* 1947) muAmerican guitarist, murume weCarol Parks. Akaberekerwa Fort Fort, Texas, 1970 akatamira kuLos Angeles. Panguva yake basa aitambisa anoverengeka mazana zvakarekodhwa uye collaborated pamwe vaimbi vakawanda kusanganisira Leonard Cohen Somuenzaniso, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Lizz Wright, Greg Lake, Billy Joel, David Cassidy uye Art Garfunkel. Akashanda zvikuru semuimbi weimba, asiwo akaitamba pamakambani, akadai se1977 nechingwa. Mumakore 2005 kusvika 2011 pamwe chete naDavid Crosby naGraham Nash.
Works Volume 1 ndiyo yechishanu studio album yeChirungu inofambira mberi rock rock Emerson, Lake & Palmer, yakabudiswa mu1977. Iyi ibhuku mbiri (2 LP, gare gare paC2 CD) uye yakakamurwa kuva zvikamu zvina zvikuru.
The Gods were Chirungu bhendi nheyo muna 1965, akatangira yakakurumbira zvikuru Uriya Heep. History skupinyMick Taylor (gare gare John Mayall & ari Bluesbreakers), Brian Glascock (akazova Bee Gees uye The Motels) uye John Glascock (akazotevera Toe Fat uye Jeturo Tull), vaiva navo pachikoro muna Hatfield nokutambawo pamwe boka rinonzi The Juniors (uyewo vatorwa), iro rakaumbwa mugore 1962. Dzavo nevaunotamba navo mumitambo akanga Malcolm Collins uye Alan Shacklock. At Columbia akanyora yokutanga kuroorwa "Pane akanaka musikana / Pocket Size" (Columbia DB7339), iro rakabuda muna 1964.
Peter Giles (* 17. 1944 June Havant, Hampshire) ndiye bassist British uye zpěvák.V gore 1967 inotangwa pamwe mukoma wake, muridzi wengoma Michael, uye guitarist Robert Fripp boka Giles, Giles uye Fripp. Kunyange zvazvo iye asina vabudirire zvikuru, asi akasunungurwa anosarudza mashoma uye imwe album. In Mumatsutso 1968 Peter Giles chikatsiviwa Greg Lake, izvo vakaumba boka King Shava. Asiwo, mangwanani 1970 akasiya Lake Giles somunhu bass mutambi munyaya album chehondo kodzero Munguva Wake pakati Poseidon rechipiri.
Gregory John Norman AM (* 10 February 1955, Mount Isa, Queensland) goroferi yeAustralia. Mu 80. uye 90. makore 20. muzana remakore rakange mavhiki masere e331 emutungamiri wenyika.Golf akatanga kushanda mumakore e15 uye makore mana gare gare akazoenda kune unyanzvi wedunhu. Muna 1976 akakunda nhangemutange yekutanga (West Lakes Classic muAdelaide) uye munguva pfupi yakatanga kusundira pureji yePGA.
Izwi rokuti superskupine rinoreva kunyanya kuimba mimhanzi kune boka rezvizivikanwi zvinodzidza zviridzwa uye vaimbi. Supergroup dzakaumbwa zvishoma nezvishoma, munguva kunopfuurira vashandi kuchinja dzakaumbwa sezvingatarisirwa mumapoka (akadai Hungu, Mambo Shava) kana zvakasikwa kubva muvare kubva anozivikanwa musicians (akadai Emerson, Lake & Palmer, akatungamirira Zeppelin, Cream). Zvimwe zvikamu zvepamusoro zvakagara kwemakumi makumi emakore, asi hupenyu hwehuwandu hwavo hwakave huri pfupi, uye kuora kwavo kwave kuchiendeswa nekupesana pakati pevanhu vakawanda kwazvo.
MuCrimson King's Court, ine zita rokuti "Kucherechedza" naMambo Crimson, inotanga kuimbwa ne1969, british progressive rock band King Crimson. Iyo album yakazosvika ku5 muKritain. nzvimbo. MuU.SA, akagamuchira RIAA Gold Plaque uye inoonekwa seimwe yezvakakosha zvemuziki wematombo anofambira mberi.
The 21st Century Guide kuna Mambo Shava - Volume One - 1969-1974 Kusarudza bhokisi, akaisa British dombo bhendi King Shava. Akasunungurwa muna October 2004 (ona 2004 mimhanzi) .This čtyřdiskový bhokisi yakatarwa ndiyo chikamu-chikamu muchinjikwa rakazara King Shava, uyo paainyora mutungamiri uye chete nhengo zvachose, guitarist Robert Fripp yokutanga. The 21st Century Guide kuna Mambo Shava - Volume One - 1969-1974, sezvo zita rayo rinoratidza, anobata pakusikwa remauto kubva 1969 pamberi payo September 1974 Fripp emauto akadzingwa mabasa. Bhokisi rakasara rine ma studio rekodi discs uye maviri makonti rekodi rekodhi dzakanga dzambobudiswa.
Zita Rangu Earl (the Chirungu yepakutanga: Zita rangu Earl) ane American mutambo series, izvo akasika American mugadziri Greg Garcia vari pamwe chete 20th Century Fox. Nyaya dzakatevedzwa kubva ku20. Svondo 2005 ku14. May 2009 paNBC. MuCzech Republic iyi nhepfenyuro inoparidzirwa naPrma Cool.
Peter John Sinfield (* 27. 1943 December Fulham, London) chiri Chirungu yokudhirowa, mudetembi uye muimbi, anozivikanwa somunhu munyori uye nhengo padombo bhendi Mambo Shava, ane co-muvambi.
Colin Flooks, rinozivikanwa Cozy Powell (29 1947 December, Cirencester, England -.. 5 1998 April) aiva British dombo bubeník.Svou Musical basa rakatanga boka navaroyi muna 1965. Muna 1971 akapinda muJeff Beck Group neaakanyora maawa maviri, ndokutanga kutamba uye akatanga nhengo yeBhedlam. Muna 1973, iye oga ari oga, Dhani NaDhiyabhorosi, anonyanya kuve mu UK hit list. Gore rakatevera Cozy akave akakurumbira paaidhirira hupenyu paTV. Akatorawo muBBC kune vana vainzi Record Breakers.
Robert Fripp (* 16. 1946 May Wimborne Minster, Dorset) ari British guitarist, mugadziri uye munyori anozivikanwa chete zvechigarire nhengo mberi padombo bhendi King Shava. Basa rake rinenge makore makumi mana rakapfuura nemitambo yakawanda yemimhanzi. Fripp yakaiswa 42. paya mu Rolling Stone magazini "100 best guitarist nguva dzose".
Asia ndiyo inofambira mberi dombo rakagadzirwa neveimbove nhengo dzeIye, Mambo Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Hold The Ladder, Uriah Heep, UK uye The Buggles mu1981.
Mambo Crimson ibhuku reBritish rock band rakagadzirwa naChristmas guitarist Robert Fripp uye drummer Michael Giles. Kazhinji, zviri kuverengwa pakati pakuvambwa boka dombo mberi mubasa rake mixes zvinogona-siyana zvitaera zvenziyo dzakadai Jazz, chekare uye experimental music, dombo Psychedelic, rinorema simbi, itsva wave, dombo rakaoma, gamelan, chevarwere, electronică uye dhiramu uye bass. Pakutanga boka reBrithani rave riri kuumba vaimbi kubva kuUnited Kingdom neUnited States kubvira 1968.
Peterborough iguta riri muruwa rweCanada rweOntario. Inoratidzira 125 makilomita nechekumabvazuva kweToronto. Peterborough ndiCanada Canoe Museum, iyo chete inoshandiswa muchiteshi chechikepe muNorth America. MuOntario, guta rinozivikanwa senheyo yeKawarthas Lakes yekuvaraidza nzvimbo. Peterborough anonzi zita raPeter Robinson, wezvematongerwe enyika weCanada, mumwe wevarongi vekuenda kune imwe nyika.
Misha Mengelberg (5 June 1935 Kiev - 3 March 2017 Amsterdam) aiva muDhanian pianist wokuDutch. Akaberekerwa kuKiev ari mwanakomana weDutch conductor Karel Mengelberg, uye mukupera kwema1930 akagara muNetherlands nemhuri yake. Akatanga kutamba piyano ava nemakore mashanu, uye kubva ku1958 kusvika ku1964 akadzidza kuHague Conservatory. Akatanga kunyora 1964 neAmerican Eric Dolphy. Munguva yebasa rake akashanda nevamwe vazhinji vanoimba, kusanganisira Steve Lacy, Peter Brötzmann, Louis Andriessen, Pino Minafra naRowell Rudd. Akasunungurawo maverengi ezvimhanzi zvake. Mune 2005, somuenzaniso, Senne Sing Song (Tzadik Records), nyanzvi yebhasist Greg Cohen uye Drummer Ben Perowsky.
Kenny Davern (. Yokuberekwa zita John Kenneth Davern. 7 1935 January Huntington, New York, USA - 12 2006 December kuSandia Park, New Mexico, USA) aiva American clarinetist. Pro basa Jazz clarinetist akasarudza paakatanga achiona Pee Wee Russell; klarinetti vakatanga kuridza nemakore gumi nerimwe. 1954 gore akatangawo boka Jack Teagarden uye 1958 Akasunungura album wokutanga pasi zita rake rinonzi Muzana Gloryland. Panguva yake basa iye collaborated nevamwe vaimbi, kusanganisira Ken Peplowski, Steve Lacy, Greg Cohen uye Paul Motian. Akafa chemwoyo wake manomwe-makore.
Crazy Ex-Girlfriend is an American romantic musical-comedy television series, yakabudiswa neCW. Vanyori vezvikamu izvi ndivo Rachel Bloom naAline Bosh McKenna. Iyo yekutanga inoparadzirwa kubva ku12. October 2015. Kubva panguva iyoyo, pane imwe yenhamba ye18, ine 2016 / 2017 TV series inouya yechipiri. 8. January 2017 station yakasimbisa kuburitswa kwechitatu chetatu, chakatangwa pa 13. October 2017.
Martin P4M Mercator yaiva ndege yepamusoro yepachikepe yakavakwa naG Glenn L. Martin Company. Mercator akanga asingakwanisi kutengesa mubhokisi reSavy Navy refu refu yebhoti rebhobhoti. Mukukwikwidza kwakagamuchirwa na Lockheed P2V Neptune. Mercator akawana basa shoma semhepo yakareba refu yekugonesa ndege. Chinonyanya kukosha ndechokuti chakakonzerwa nekubatanidzwa kwepiston uye jet injini.
Ice Hockey World Championships 2011 16 vakapinda National týmu.Soupiska American týmuTrenéři Scott Gordon, Phil Housley, Greg CroninSoupiska Belarusian týmuTrenéři Eduard Zankovec, Vladimir Tsyplakov, Aleksandr AndlexejevSoupiska Czech týmuTrenéři Alois Hadamczik, Josef PalečekSoupiska Danish týmuTrenéři Per Bäckman, Tomas JonssonSoupiska Finnish Jukka týmuTrenéři Jalonen, Petri Matikainen, Pasi NurminenSoupiska French týmuTrenéři Dave Henderson, Pierre Pousse, Lionel CharrierSoupiska Canadian týmuTrenéři Ken Hitchcock, Scott Arniel, Peter DeBoerSoupiska Latvian týmuTrenéři Oleg Znarok, Leonids Beresnevs, Harijs VītoliņšSoupiska German týmuTrenéři Uwe Krupp, Ernst Höfner, Harold KreisSoupiska Norwegian týmuTrenéři Roy Johansen, Knut Jørgen Stubdal, Per-Erik AlcénSoupiska yeAustria týmuTrenéři HRE Gilligan, Manny Viveiros, Kurt HarandSoupiska týmuTrenéři Russian Vyacheslav Bykov, IG kana ZacharkinSoupiska Slovak týmuTrenéři Glen Hanlon, Frantisek Hossa, Ĺubomír PokovičSoupiska Slovenian týmuTrenéři Matjaž Kopitar, Nik ŽupaničSoupiska Swedish týmuTrenéři Par Marts, Roger Rönnberg, Stefan LadheSoupiska Swiss chikwata
MIT Daedalus 88 yaiva ndege yakadzivirirwa nevanhu inowanikwa kuMassachusetts Institute of Technology (MIT, Cambridge, USA) ne23. April 1988 akaenda kumakiromita 115,11 kwemaawa 3 nemaminitsi 54.
Czech bass vatambi AZ Douda Milan (Jan Sezelim, pamatongo, cheka, rizere miti yakarukana ruzha, CA-NA Band, Dr. Jane) Mark Bero (Low Heaven, aimbova Krucipüsk) Bronislav "Bruno" Kovarik (Krabathor) Zbynek Rýpar (Liveevil) Karel Ferda ( orchids) Karel mały (Acoustix) Mark Abrahama (SK) - (Fleret) Vladimir Adamský - (Santa) Jakub Antl - NightworkMilan Hanák - (TITANIC) Gusta - ProhibiceRobert Balzar -. (semuenzaniso South Africa, D. Bárta & Illustratosphere Hana Hegerová) Oto Bezloja (nyanzvi pakurwa nemabhuru) Milan Broum (Olympic) Filip BenešovskýOndřej muBohemia - KvětyVilém COK - (New Rose, Prague kusarudzwa) George "Marita" Dvorak - (Našrot) Kohout - Zdrawej důchodLuboš Vršanský (Elementa, Ahard) Pavel Fort -. (eg Flamengo ) Pavel Vashurkina - (Dreadrot) Jan HaisJan Hromas - (Kučerovci, kare uyewo Greenhorns) Marek "Mara" Kohout - (Sandra wake Vembloudi) (Whale) Matthew Havlicek - (Chamber Worcester, Final Vision, Fastfood, JamiroquaiCZ, Michal Foret , Multiplayer) M Ato Ivan (SK) - (Michal Pavlicek, BSP, Chameleon, Krucipüsk, neGebha Al Dhábba), Fredrik Janáček - Jakub Janků (-123 Maminitsi, Sun Orchestra.) - (Eks. Thesaurus, Wolfarian) Honza KrausMichael Beautiful - Laco DécziZdeněk Kub - (Arakain) Vladimir Rubber KulhánekMartin Light - Lucie BíláPavel Chrastina OlympicVláďa Caisek - Buffalo BillJiří Meisner - (uswa wechipiri, Kamelot) Mardoša - (Tata Bojs) Petr Novotny - (Zalman & spol. , Cohiba) Vojtěch Novak - Koudelníkův synVladimír PadrůněkPeter Pavlik - (Yo Band Yo) Petr Rotschein - (Kamelot) Milan jira - NedvědiFrantišek RabaPavel Jakub RybaRichard Scheufler - (Sheuflers, Prague kusarudzwa II, King Size) Milan Špalek - (jazi) Martin ŠtecSvatopluk ŠvábJiří Vesely - (. semuenzaniso Big misoro Ebony Brothers) Otto Kokštein - (Upengo eg.) Karel ŠípPepa Šiko - (Doga) Michal Šerák - (tacit chibvumirano, 2Wings, Daryl Green) Franz Franz Fiedler- (DTR) Jindra Vobořil - (eg . kwazarirwa, Noutachiona, Gen, Pump, 39 Special) Miroslav Vitous - (Weather Report) Kůstka Josef - (Blue Kunoita) Jiri Kucera DrnecVojta (trampoline Reunion Band) George "Old Man" Sindelar - (Catapult) Petr Kuliš Kujal - (Streetmachine) Kembelín Prokeš - (Lucky Nero) Martin "Donald" Donat - (Booters) Michal Voldřich - (Mapaipi) Pavel "Chozo" Jurda - (Bluesberry) PBCH. - (Lucie, Wanastowi Vjecy)
Crazy Horse is an American rock band anozivikanwa nekushandira pamwe naNeil Young. Kubvira ku1969 kusvikira nhasi, Crazy Horse neYokunge vakanyora studio ye11 uye mamwe mavhidhiyo ari mupenyu. Aya mavhidhiyo anosunungurwa seNeil Young uye Crazy Horse. Hondo yeCrazy, iri mu 1971 - 2009 series, yakabudiswa matanhatu studio albums.
Kudzokera Kumadziro ibhuku raBilly Sherwood, rakabudiswa mu2005. Akashanda nevaimbi vakawanda kubva kumapoka akawanda akakurumbira mumatombo eCherwood. Izvo album inosanganisira mazita kubva kuThe Wall kubva Pink Floyd. 2006 yakabudisa imwe album, iine Dark Dark Side of the Moon (uyewo kubva kuna Pink Floyd), uye inonzi Kudzokera Kumumvuri Wemwedzi.
November ndiye 314. zuva mugore karenda yaGregory (315. zuva ari achikwakuka gore). Panozopera gore anoramba mazuva 51. Holiday vaipemberera Evžen.UdálostiČeské země1620 - Mazuva Two pashure Hondo White Mountain muPrague capitulated hondo Ferdinand II. Štýrského.1664 - umbwa Diocese královéhradecká.1989 - Kana njanji tsaona pedyo New Kopisty akauraya 6 58 vanhu uye paiva zraněno.Svět1444 - Crusader ngarurege waMambo Vladislav III. Varnenčika vakakundwa panguva Hondo Varna vokuTurkey rinotungamirirwa Murad II. uye Vladislav akanga zabit.1494 - dzakabudiswa yokutanga guru bhuku nyaya Summa of Arithmetica, geometry, kuenderana nokuda Luca bv Proportionality Pacioli.1871 - Henry Morton Stanley akawana akarasika mufambi David Livingstone pedyo nyanza Tanganika.1918 - akazivisa Saxon republika.1970 - kwakatangwa mwedzi gororo 1.Narození Czech 1719 - Jan Krumlov, munyori uye virtuoso Viola d'amore († 24 1763 September.) 1772 - Johann Nepomuk Kanka, munyori uye gweta († 15 1865 April.) 1812 - Josef Jaroslav Křičenský, mumutsidziri Czech munyori (. † 16 April 1886) 1828Konrad Bayer, wechesi munyori, munyori anonzi haufi mabasa († 21 September 1897.) Franz Jordan, Czech entrepreneur uye wezvematongerwo enyika kuti German nyika († 9 December 1884.) 1834 -. Martin Josef Novacek, kondakita, munyori uye mumhanzi mudzidzisi kwenyika (. † 19 1906 March) 1845 - Karel Vrba, mineralogist, Rector Ka rlovy, enyika († 7. 1922 December) 1869Wilhelm Elsner, muimbi dhanzi († 26. ? August 1903) Michal Tomik, Czechoslovak enyika (†) 1872 - Francis Klokner, Rector of Czech Technical University († 8 January 1960) 1874Otakar Bradáč, munyori († 11 January 1924) Leopold Škarek, ruwa vaJesuit († 23... March 1968) 1875 - Vaclav Myslivec, Czechoslovak enyika († 29 May 1934) 1876 -. Martin Bohdan Lany, Czech mufambi, muzvinabhizimisi uye mumishinari († 1941) 1880 -. Bohumil akangwarira, mumiriri mukuru archdiocese wokuPrague († 20 May 1965) 1883 - Bedrich Antonin Wiedermann, nhengo virtuoso, mumhanzi mudzidzisi uye munyori († 5 1951 November.) 1886 - růžena šlemrová, Czech mutambi († 24 1962 August.) 1894Stanislav Mentl, MS. Gurukota Public Health Nokusangana Education († 12 1981 September.) Jaroslav Vacek, legionnaire uye kuzvidzivirira murwi († 23 1944 August.) 1899 - Jan Roth, Czech cinematographer (. † 4 1972 October)
UdálostiFestival Isle of WightSteve Howe akatsiva muboka Hongu guitarist Peter BankseZaložené skupinyThe Doobie Brothers, aimbova hwokuzvarwa nahwo, kunobva Tom Johnston, Patrick Simmons, John Hartman, Dave Shogren.Electric Light Orchestra yakavambwa Roy Wood, Jeff Lynne uye Bev Bevan.HorslipsKantořiOceanQueen akavamba nhengo nhatu dzokutanga Freddie Mercury, Brian May uye Roger Taylor. Bassist John mudhikoni vachabatana kumusoro 1971.StyxEmerson, Lake & Palmer Keith Emerson, Greg Lake naCarl Palmer.Earthen VesselZaniklé skupinyThe Beatles dziparare. Nhengo All ngaateme Solo alba.The Dave Clark FiveThe MonkeesSimon & Garfunkel dziparare uye vose nhengo vaviri vakanongazve Solo kariéru.The Nice dziparare. Keith Emerson inobva ELP.Zemřeli17. January - Billy Stewart, muimbi (32 makore) 3. September - Alan "Mapofu Owl" Wilson, nhengo zvomumagaba Heat (27 makore) 18. September - Jimi Hendrix, kuti guitarist uye muimbi (makore 27) 19. October - Janis Joplin, muimbi (27 makore) AlbaDomácí Coniunctio - Blue Mugumisiro uye Jazz Q PrahaKlíč neruzivo - The Progress Organisation (EP) Kufungisisa - The Blue EffectSynkopy 61 - Synkopy 61 (EP) Foreign 12 Songs - Randy Newman ndebvu Stars - Tyrannosaurus Rex Song Akandikodzera - FamilyABC - Jackson 5Abraxas - SantanaAfter kuGold Rush - Neil YoungAirconditioning - Curved AirAll Zvinhu Anofanira Kutara - George HarrisonAmerican Beauty - Ndinotenda DeadAmerican Woman - The fembera WhoAnyway - FamilyAtom Heart Mother - Pink Floyd Tribute kuna Jack Johnson - Miles Davis mutero kuna Best damn Fiddle Player munyika - Merle ehama dzainge, CountryBand pakati Gypsys - Jimi HendrixBarrett - Syd BarrettBenefit - Jeturo TullThe Best of Pink Floyd - Pink FloydThe Big O - Roy OrbisonBill Haley kuti Scrapbook: Rarama panguva pakupopotedzana - Bill Haley CometsBitches ake & bika - Miles Davis, JazzBlack Sabata - Black SabbathBridge Over Trouble D Water - Simon & GarfunkelCanto Libre - Víctor JaraChanges - The MonkeesChapter 2 - Robert FlackChicago (dzimwe nguva Inotaurwa sezvo Chicago II) - ChicagoClimbing! Home MountainCloser vake - - Grand Funk RailroadClose Kwauri - CarpentersCome To Garden wangu - Minnie RipertonCosmo kuti Factory - Creedence Clearwater RevivalCucumber Castle - The Bee Gees
Hershey Bears ishizha rinodzidzira hockey team rinopinda paAmerican Hockey League. Dare rinoshanda muHershey, Pennsylvania. Mitambo yavo yemusha inowanikwa muGiant Center Arena. "Bears" ndiyo kechikwata chakareba kwazvo muAHL - sezvo 1938 iri mumakwikwi. Dare rakadha 20. December 2006 yako 5,000. kutarisana mumakwikwi. Muna 2010, kambani yacho yakakunda Calder Cup yegumi neimwe, nyanzvi yeAHL mukunda, nhamba yezvinyorwa mumabhuku ose emutemo.
Jackass is an American tv show on MTV kubva 2000 kusvika 2002. Iyi iboka revanhu vanogadzira zvinhu zvakawanda, zvinotyisa, zvinonakidza asiwo zvinoshoora mamiriro ezvinhu. Pakuguma kweratidza, mafirimu e-4 akafananidzwa nevatsigiri veJackass, mumwe wavo kunyange mu3D. Mafirimu ose aya akatsoropodzwa nevatsoropodzi vemafirimu. Dhiyabhorosi uye vadziviriri varo vanozivikanwa zvikuru pakati pevechiri kuyaruka; vabereki vavo nokuda kworudzi rwevaraidzo, runowanikwa muna Jackass, havawanzowani kunzwisisa. Kunyange zvazvo Jackass ane nyevero yokutanga kuti ave nechokwadi chokuti avo vanozviona havasi kuzouya, yekutanga Jackass inowanzotevedzwa, kusanganisira mapoka akawanda muCzech Republic.
Thomas Alan anomirira (* 7. 1949 December Pomona, California, USA) chiri American muimbi, mukurumbira singer, kunyora nziyo uye mutambi. Yake nenzwi American mutsoropodzi Daniel Durchholz akanyora: The maitiro Inzwi uye nziyo rinobatanidza chanson, mwoyo, Jazz uye experimental zvinhu kuti dzimwe nguva inoganhurana anenge aine maindasitiri music, anomirira hwakavaka mukurumbira sezvo yakasimba nziyo unhu.
United States panguva Summer yeOlympic muLos Angeles 1984 522 aimiririra vatambi (339 183 varume nevakadzi) ari anoranga 217 25 sportech.Medailisté zvabuda kubudikidza disciplínAtletikaPodrobnější mashoko, ona Athletics panguva Summer yeOlympic 1984.MužiMuži, 400 metrůAlonzo BabersRozběh - 45.81Čtvrtfinále - 44.75Semifinále - 45.17Finále - 44.27 (→ goridhe menduru) Antonio McKayRozběh - 45.55Čtvrtfinále - 44.72Semifinále - 44.92Finále - 44.71 (→ endarira menduru) Sunder NixRozběh - 45.42Čtvrtfinále - 45.31Semifinále - 45.51Finále - 44.75 (. → 5 nzvimbo) Men 5 000 metrůDoug PadillaRozběh - 13: 52.56Semifinále - 13: 41.73Finále - 13: 23.56 Don ClaryRozběh - 7 (→ 13 nzvimbo.): 44.97Semifinále - 13: 46.02 (→ haana mberi) Steve LacyRozběh - 13: 46.16Semifinále - 13: 46.65 (→ haana mberi) Men 10 000 metrůPat mutakuri Peace Maker - 28: 19.94Finále - 28: 34.59 (→ 15 Place.) Craig VirginRozběh - 28: 37.58 (→ haana mberi) Paul CummingsRozběh - 29: 09.82 (→ haana mberi) Men marathonPete Pfitzinger - 2: 13: 53 (→ 11. nzvimbo) Alberto Salazar - 2: 14:. 19 (→ 15 nzvimbo) John Tuttle - haana kupedza (→ pasina nzvimbo) Varume kusvetuka vysokýDwight StonesKvalifikace - 2.24mFinále - 2.31 (→ 4 nzvimbo) Doug NordquistKvalifikace - 2.24mFinále - 2.29 (→ 5.. nzvimbo) Milton GoodeKvalifikace - 2.24mFinále - pasina kunyora (→ pasina nzvimbo) Varume kusvetuka dalekýCarl LewisKvalifikace - 8.30mFinále - 8.54 (→ goridhe menduru) Larry MyricksKvalifikace - 8.02mFinále - 8.16 (→ 4 nzvimbo) Mike McRaeKvalifikace -. 7.89mFinále - 7.63 (→ 11. nzvimbo) Men trojskokAl JoynerFinále - 17.26 (→ goridhe menduru) Mike ConleyFinále - 17.18 (→ sirivha menduru) Willie BanksFinále - 16.75 (→ 6 nzvimbo) Men pm oštěpemTom PetranoffKvalifikace -. 85.96mFinále - 78.40 (→ 10 nzvimbo) Duncan AtwoodKvalifikace. - 79.34mFinále - 78.10 (→ 11 nzvimbo.) Steve RollerKvalifikace - 75.50 (→ haana kufambisa, 18 nzvimbo.) Varume vane kok pamusoro tyčiMike TullyKvalifikace - 5.45mFinále - 5.65 (→ sirivha menduru) Earl BellKvalifikace - 5.45mFinále - 5.60 (→ endarira menduru)
Helixje Canada rakaoma rock / heavy metal band yakatanga mu1974. Rwiyo rwavo runonyanya kuzivikanwa kubva ku1984 "Rock You". The yepakutanga mutsetse vakakwira yaiva muridzi wengoma Bruce Arnold uye vatungamirire muimbi Brian Vollmer, guitarists Ron Watson uye Rick "nomuridzi wembira" Trembley keyboardist Don Simmons uye bassist Keith "Bert" Zubrigg.
Iyo 1997 Rowing World Championship yaiva 26. chikwata chakaitwa pakati pe 31. August uye 7. September 1997 musi Lake Lac d'Aiguebelette muna savoy muna Francii.Každoroční kukwasva regatta usingaperi vhiki imwe rakarongwa weInternational Rowing Federation (International Rowing Federation, FISA), kazhinji mukupera muzhizha kuchamhembe hemisphere. In dzisiri Olympic apfuura, World Cup rinomiririra mugumo wacho kukwasva karenda dzakawanda uye gore anotangira Olympic Games, ndiko chavainyanya Kukodzera chiitiko. MuMitambo yeOlympic, chirongwa chekukwikwidza chinosanganisira chete zvisiri zveOlympic.
Tsamba yevarume yeHockey paZvino 2014 Winter yaitamba ne 12. ku23. February muna Sochi paBolsai Ice Arena uye Shaiba Arena stadiums. Kukunda kweVancouver kwakadzivirira chikwata cheCanada apo chakakunda 3: 0 mukupedzisira.
Chikwata Chekutanga Chivhurwa chikwata chema tennis chevakadzi, chinotambwa gore rose paWull Tour ku Connecticut New Haven, kuCullman-Heyman Tennis Center. Zvinotora kunze kunze kwemajeri akaoma neDecoTurf pamusoro sechikamu cheWTA Premier category. Mutambo wacho chikamu chehurumende yeU.S. Open Series yeNorth America, chikamu chegumi chechikamu chakaitwa mukati memavhiki masere pamberi peU.S. Open.
The Falls: Testamente yeRudo ndeyeAmerica 2013 pefirimu inotungamirirwa naJon Garcia maererano neshoko rake. Iyo firimu inotevera fates yeThe Falls mushure memakore mashanu.
Alice Cooper akaberekwa Vincent Damon Furnier (* 4. 1948 February Detroit, USA) chinhu American muimbi dombo, kunyora nziyo uye muimbi ane basa zvaiva hafu století.S Danho zvinoratidza kuti inobudisa guillotines, dzemagetsi macheya, nyepera ropa uye Boa nyoka Strangler Royal aiva kunovhengana kuti mifananidzo kubva anotyisa, cabaret, mumhanzi, weheavy metal uye garaji dombo, akaita yakakurumbira nokuda Alice Cooper chinoshamisa chepanzvimbo muchiso nedombo mumhanzi kuti akazozivikanwa nehana dombo.
Uria Heep ibhuku reBritish rock rakatangwa mu1969 muLondon. Gumi dzavo Albums kusvika UK Albums Chart (kudzokera zvokufungidzira pasingasvikirwi 7. 1975 partitions pagore), apo namashanu Uriya Heep Albums muna Billboard 200 aiva Madhimoni vakabudirira & Wizards (#23, 1972) pamwe neboka akatungamirira Zeppelin, Sabata Remafu uye Mucheka Wakadzika wakaita Uriya Heep mumwe wemapoka ematombo ekutanga kwe70. makore.
Pasi pechifukidzi ndiyo yepfumbamwe solo studio album yeBritish muimbi Ozzy Osbourne yakabudiswa munaNovember na 2005 pa Epic Records. Muiti wake aiva Mark Hudson uye album yakaiswa pa 134. inzvimbo muBillboard 200. Iyo album ine chete inotakura; mumwe wavo, "Mississippi Queen" kubva kuGomo reMakomo, akaonekwawo seasina. Mumugwagwa uyu, anotamba gitare Leslie West, nhengo yeboka reMakomo, uye mubati wenyanzvi yenziyo. Mune rwiyo "All Young Dudes", inzwi rinonzi Ian Hunter kuimba mumutauro wake wekutanga weMott the Hoople.
IQNUMX Elite Ice Hockey World Championship yakasangana nemakwikwi eZimbabwe gumi. Boka rimwe nerimwe rine zvishoma 2015 skaters (vanoshora uye vadziviriri) nevarindi vezvipiri, uye kupfuura 16 skaters nevatori vezvikwata vatatu.
Richard Laughlain "Lochlyn" Munro (* 12 February 1966, Lac La Hache, British Columbia, Canada) iCanada actor. Iye anozivikanwa nokuda kwebasa mumavhidhiyo akaita seusiku paRobertbury, Scary Movie, Vamwe Like Blond naFreddy vs. Jason. Kwemakore 1999-2000 yakaidza Jack Sheridan mumutambo wepamusoro-soro The Witches. Iko kunoridzirwa kwemashoko anopfuura 200 mumutambo weTV uye mafirimu.
1942 (MCMXLII) ndiyo gore rakatanga maererano maererano nekarenderi yaGregory neChipiri. ZviitikoProtectorate yeBohemia neMoravia21. March - Scopt. Václav Moravek, uyo akareba kupfuura vose veMatatu Madzimambo, akafira muhuturo uye vane zviuru zvakasiyana-siyana zveGestapo27. May - Jozef Gabčík naJan Kubiš vakaita basa reAnthropoid uye vakabvisa vamiriri veReich Protector uye RSHA Chief Reinhard Heydrich10. June - Chijeremani maNazi akaparadza musha Lidice u Kladna18. June - vanomwe vanopinda muchechi vanovanzwa muchechi yeSt. Cyril naMethodius (Adolf Opalka, Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublik, Jan Hruby, Jaroslav Svarc)
The Chipo imwe pamusoro netsika muna Mormonism (kunyange zvose Mormon mhemberero kuziva kwemauto ichi) .Obdarování kunge akatanga kubva 1842 Mormon muvambi Joseph Smith sechikamu dzomunyika chakavanzika tsika mukati Mormon Church. Pari kubudikidza Endowment CJKSPD kuburikidza nhengo dzose mukuru, kana zviri akakodzera. Munhu wese anokurudzirwawo kuita Glorious Rite ceremony. The mhemberero yaiva kosi kare kakawanda modernized. Maererano CJKSPD kwete anonamatwa murume uye haagoni kudzokera pamberi paMwari kudenga pasina mhemberero Gift ..